China wayesebenza olumnandi wayesebenzisa yentsimbi Dutch eziko ukwenziwa kunye mveliso | ISANXIA
I-enamel efanelekileyo kunye neyolisayo idibanisa i-oven yaseDutch
Ingcaciso:Φ305 * 90mm
umbala:Ipinki, luhlaza, orenji, blue, mfusa kunye nokunye, konke ngokweemfuno zakho
I-pot ye-enamel yeyona nto isetyenziswa kakhulu ekuphekeni kwasekhaya, kuba inegunya lokuhambisa ubushushu kunye nokugcina. Ukutya kokutya kukhawuleza kakhulu, okunokwandisa izakhono zakho zokupheka.
Isinyithi esingagqitywanga sinokusetyenziswa phantse kuzo zonke iindawo zokupheka, kubandakanya ukufakwa, umbane, irhasi kunye nezitovu zeceramic. Ingasetyenziswa nakwi-oveni, ukuya kuthi ga kwiidigri ezingama-500!
Isinyithi esenziwe nge-enameled sinobumba obucwebezelayo, obungashukumiyo obugqibeleleyo bokuqhotsa, ukujija, ukubhontsa, ukubamba, ukubhaka kunye nokunye! Ukusetyenziswa kobushushu obusezantsi kuya kuthintela ukutya ekuncamatheni. Izixhobo zensimbi zinokukrwela ukugqitywa kwe-porcelain, ke sebenzisa izixhobo ezenziwe ngomthi, nge-silicone okanye ngenayiloni.
I-glaze ye-porcelain egudileyo, ebotshelelwe kwisinyithi esiqinileyo, yenza i-cookware entle yokuhombisa! Oku kukhokelela kuzo zonke izibonelelo zentsimbi, njengokugcinwa kobushushu okuphezulu kunye nokusasazwa kobushushu, ngaphandle kwehla. Isinyithi se-enameled ayifuni isinongo, kwaye ayimelani nokutya okune asidi kunye nealkali. Imibala engaphandle eqaqambileyo kunye nendawo emnyama yangaphakathi yongeza umbala ochwayitileyo ekhitshini lakho!
izibambo ze-ergonomic zenza kube lula ukuhamba okanye ukuphakamisa ipani yakho. Soloko usebenzisa iimittshi ze-oveni okanye iiphathi xa uphethe ipani; Sebenzisa isiciko sokuzulazula kwaye ugcine ukutya kunye nokubhabisa, ukubhaka, ukuntywila nokwenza isitshixo! Obu bunzulu bunzulu kunesiqhelo casserole eqhelekileyo.
Isinyithi esenziwe nge-ayim i-dishwasher ikhuselekile, kodwa sicebisa ukuba kuhlanjwe izandla ukugcina isiphelo esimenyezelayo. Hlamba ngesandla ngamanzi afudumeleyo kunye nesepha encinci.
Umbala wemveliso ukuwe ukuba ukhethe okanye wenze ngokwezifiso. Umgangatho wemveliso uya kuhlolwa ngokungqongqo yiSanxia. Iindlebe, iindonga kunye nemibala yebhodwe iya kuqinisekisa ukuba akukho ziphene kuzo zonke iinkalo. Iinkcukacha ziyaqinisekisa. Ewe kunjalo, ukongeza kuvavanyo lokujonga, ukuvavanywa kobungcali kwemveliso kuya kuphunyezwa ngokungqongqo. Umgangatho wemveliso yeyona nto siyithandayo.
Egqithileyo I-enamel imbiza yesuphu yembiza yendlu engama-24cm engekho intonga ye-enamel yentsimbi yokubhaka imbiza
Okulandelayo: I-enamel ekumgangatho ophezulu engaxutywanga yintsimbi yokuqhotsa ipani yesitovu
i-Cast yentsimbi enqabileyo, xtreme Iron Skillet, ebizwa ngokuba yiCast Iron Skillets, I-Iron Iron Skillet, uNamel Skillet, Isinyithi se Iron Iron,